Vinaigrette nge ubhontshisi noma amathiphu ambalwa sendlela isaladi
Dish, okuzoxoxwa, lethiwa iNdlovukazi Catherine 2, ezazidume ngokutshala indlela yalo yokuphila. Kwenye indawo okwakuvinjwe sokudla, ngokunambitha ikhonza, ikhiphe isaziso: "Fie, hhayi Greta!". Yingakho igama lalowo isaladi. Dish yasungulwa chef isiRashiya, mhlawumbe ekhulwini le-19. Kodwa ilizwi izimpande zawo kusukela French futhi lisho "uviniga" noma into omuncu kakhulu. Njengoba sekunama-Vinaigrette senziwa ngezindlela ezahlukene, ukushintsha imikhiqizo, ekhuphuka nge izinketho ezintsha. Kodwa Izingxenye ezisemqoka isaladi wahlala sauerkraut kanye abilisiwe beet abomvu.
Namuhla sikhuluma ukulungiswa isaladi ukunikeza izindlela ezimbalwa. Kodwa okokuqala, Ngifuna ukugqamisa amaphuzu ambalwa kudingeka wazi Sebawoti. Ngokwesiko, isidlo ibekwe endaweni slide endishini wakhonza abandayo. Yebo, Vinaigrette - appetizer abandayo, kodwa le nkinga bese uyithumela kungaba ezahlukene. Kubukeka isaladi omkhulu nobhontshisi, babeka ulethisi abacaphuni, okuyinto bawakhohlise we esobala enokukhanya kwelanga oluhlaza. Top ungakwazi ufafaze amakhambi oqoshiwe, noma umane ufake sprig of dill kanye parsley. Enye - babeka flat ipuleti slide esakhiwe kanye nemikhiqizo exubile, futhi sandise izithako ngamanye kahle ukusika elibazungezile.
Ukuze uthole isaladi esihlwabusayo ngokuthi yintokozo, kubalulekile ukuba sicabangele amathiphu ambalwa uma bepheka. Okubaluleke kakhulu, yonke imikhiqizo kuphekwa ngokwehlukana futhi usike nje chilled. I umncane imifino oqoshiwe, isaladi ne ubhontshisi kuyoba tastier. beetroot Red kungcono hhayi ukupheka ubhake. Kule indlela kulungiselelwa kuyoba ekhethekile ukugcwaliswa isaladi ukunambitheka. Ngaphambi usike beet ukugxambukela neminye imikhiqizo, kubalulekile ukuba uthele amafutha. Lokhu kuyokunika okwakuvela ohlotsheni olukhethekile lwenkanyezi isaladi.
Njengoba kushiwo ngenhla, isaladi ne ubhontshisi kungenziwa kuphekwe ngezindlela ezahlukene, yilowo nalowo wesifazane enza ngokuhlukile. Kodwa uma ungazi kanjani ukulungiselela Vinaigrette zakudala, ezinye izindlela azitholakali. Ukulungisa zakudala zemifino isaladi imifino kumele kubiliswe, epholile futhi zihlanzwe. Fake usike izaqathe, beet, ukhukhamba. Amazambane uthathe cubes, futhi anyanisi - izindandatho uhhafu. Uma ungeza anyanisi oluhlaza, ahlukaniswe tincetu ezincane. Ubhontshisi futhi wengeze kungekho kwasani. Konke lokhu ukuxubana kabuthaka nangokuthula engeza the isibambo kusukela neklabishi brine. Engeza usawoti kanye inkathi amafutha sunflower.
Salad nobhontshisi, iresiphi okuyinto isisekelo ezinye, kuye kwaholela isidlo esisha. Ngokwesibonelo, uma e isaladi, iphekwé leresiphi, engeza amakhowe (ungavele usawoti, kodwa ungakwazi amanzi okugqumisa), uthola kokugoma - mushroom Vinaigrette. Kukhona okukhethwa kukho abaningi: ungakwazi ukwengeza izinhlanzi abilisiwe, inyama (ukuncika kuphela), ulimi abilisiwe futhi okunye. Konke kuncike izifiso zakho, onjani isaladi ufuna ukuzama. Kukhona indawo umcabango. Ungabona i-fun.
Njengoba isampula lokhu kucwaninga banikwa iresiphi okungavamile isaladi okuphekiwe. Indlela isaladi obukhethekile ubhontshisi? Kufanele kuthathe amagremu 100 iklabishi, amazambane 3, 1 - izaqathe, beet, ukhukhamba, amafutha yemifino, pepper ukunambitheka phansi kanye nosawoti. Imifino bahlanza futhi uthathe ifomu ushizi, izingqimba lamapulangwe ebhodweni egcwele nengxenye egcwele ngamanzi abilisiwe imizuzu engaba ngu-15 ngemva abilayo. Ngokulandelayo, amanzi asele kumele zisuswe, ukunikeza isikhathi sokwehlisa intukuthelo futhi siqhubekele nge sauerkraut, ukhukhamba no-anyanisi. Engeza usawoti kanye inkathi nge-pepper ngxube ugcwalise ngamafutha. Indishi usulungile.
Futhi ekugcineni, sifuna ukunikeza ezihlukahlukene ukuze iholidi lakho noma kwansuku imenyu isaladi ne ubhontshisi kanye pepper. Sidinga imikhiqizo efana okusemathinini ubhontshisi obomvu, bell pepper (mhlawumbe oluhlaza), ummbila okusemathinini, imayonnaise imifino. Zonke izithako kumele zixutshwe ngaphambilini nkinga uketshezi ubhontshisi nommbila futhi slicing pepper. isaladi Bright esihlwabusayo iyoba omunye izintandokazi zakho.
Sunflower Salad nge chips: iresiphi. Kanye nezinye Ungadla and chips
MAZ 4371 kanye nezici zayo
Blender Bosch MSM 6B700 kufanele ibe njalo ikhishi